အသံမြိုးစုံလုပျနိုငျသူ မငျးသား ခြော လေးနတေိုးနဲ့အတူ သီခငျြးတိုကျနေ တဲ့ နီနီခငျဇျော – XB Media Myanmar
သီခငျြးတိုငျးကို အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုတတျသူကတော့ အဆိုတျောမလေး နီနီခငျဇျောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ Melody World သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲ မှတဈဆငျ့ ဂီတ လောကကို ဝငျရောကျလာသူဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့အ ဆိုတျော တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးကှဲ သီခငျြး လေးတှဟောလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ အမွဲထပျတူကနြတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျရကျပိုငျးကလညျး အဆိုတျော X Box နဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ ” ဒို့ခတျေ ” ဆိုတဲ့ Music Video လေး ထှကျရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာလညျး ” အိမျမကျကာရနျ ” ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှေ လုပျ ဆောငျ နတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျလညျး ” “အိပျမကျကာ ရနျ” အဖှဲ့သားတှနေတေို့ငျးကွိုးစားနပေုံလေးတှမြှေဝလေိုကျ ပါတယျ
အတတျနိုငျဆုံးရှိသမြှအားတှနေဲ့ကွိုးစားပွီး Musical Songs တှဖေနျတီးနပေါတယျသီခငျြး အပုဒျ၂၀ ပါဝငျမှာဖွဈပီး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးအဟောငျး နဲ့အတူတေးသီခငျြး သဈတှေ ကိုတော့ ဆရာဓိရာမိုလျ ဆရာရှဂြေျောဂြျောနဲ့ ဇာတျဝငျခနျးမြား ဇာတျကောငျမြားတခု ခငျြး ဆီအလိုကျနီနီ သီခငျြးအသဈ ၇ ပုဒျ ပါဝငျရေးဖှဲ့ထားပါတယျ….
#PreproductionDays ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ အသံမြိုးစုံလုပျနိုငျသူ မငျးသားခြောလေးနတေိုးနဲ့အတူ သီခငျြးတိုကျနတေဲ့ နီနီခငျဇျောရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျနျော။
Source and Photo Credit – Ni Ni Khin Zaw’s Facebook Page
သီချင်းတိုင်းကို အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုတတ်သူကတော့ အဆိုတော်မလေး နီနီခင်ဇော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Melody World သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ မှတစ်ဆင့် ဂီတ လောကကို ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အ ဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းကွဲ သီချင်း လေးတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အမြဲထပ်တူကျနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကလည်း အဆိုတော် X Box နဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ ” ဒို့ခေတ် ” ဆိုတဲ့ Music Video လေး ထွက်ရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ” အိမ်မက်ကာရန် ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ် ဆောင် နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်လည်း ” “အိပ်မက်ကာ ရန်” အဖွဲ့သားတွေနေ့တိုင်းကြိုးစားနေပုံလေးတွေမျှဝေလိုက် ပါတယ်
အတတ်နိုင်ဆုံးရှိသမျှအားတွေနဲ့ကြိုးစားပြီး Musical Songs တွေဖန်တီးနေပါတယ်သီချင်း အပုဒ်၂၀ ပါဝင်မှာဖြစ်ပီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းအဟောင်း နဲ့အတူတေးသီချင်း သစ်တွေ ကိုတော့ ဆရာဓိရာမိုလ် ဆရာရွှေဂျော်ဂျော်နဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ဇာတ်ကောင်များတခု ချင်း ဆီအလိုက်နီနီ သီချင်းအသစ် ၇ ပုဒ် ပါဝင်ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်….
#PreproductionDays ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် အသံမျိုးစုံလုပ်နိုင်သူ မင်းသားချောလေးနေတိုးနဲ့အတူ သီချင်းတိုက်နေတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။